Vaovao - Fanasokajiana ny bibikely
Fanasokajiana ny bibikely
Ny bibikely dia afaka mifehy ny hakitroky ny olona na mampihena na manafoana bibikely manimba.
Araka ny fomba fiasa dia azo zaraina ho: poizina vavony, famono otrikaretina, fumigant, mpandraharaha misintona anatiny, bibikely famonoana bibikely, famonoana bibikely feno sns.
Bibikely famonoana vavony:ny fanafody dia miditra amin'ny vatan'ny bibikely amin'ny alàlan'ny taovam-bavan'ny bibikely sy ny rafi-pandevonan-kanina, mahatonga ny fahafatesan'ny poizina bibikely. Toy ny: trichlorfon, methyl isomerphosforus sns. Ampiasaina amin'ny fifehezana ny bibikely bibikely mitsako (toy ny tigra an-tanety, ny voanio, ny valala, sns.) Ny vavan'ny siphon (lolo) ary ny milelaka bibikely (lalitra).
Mifandraisa amin'ny bibikely famonoana bibikely: Ny bibikely dia miditra amin'ny vatan'ny bibikely amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ny rindrin'ny vatan'ny bibikely (ao anatin'izany ny epidermis, antennae, appendages, tongotra, elatra sns.), Ary mahatonga ny vatana bibikely ho voapoizina ary maty. Toy ny: bibikely pyrethroid cypermethrin, deltamethrin sns. Mety amin'ny karazana bibikely bibikely miaraka am-bava, fa tsy an'ny bibikely bibikely misy sosona savoka ary fiarovana hafa amin'ny rindrin'ny vatana (toy ny bibikely mizana).
Fumigant: afaka etona ho etona misy poizina eo ambanin'ny maripana sy ny tsindry mahazatra, na ho simba amin'ny entona misy poizina, ary hiditra amin'ny vatan'ny bibikely amin'ny alàlan'ny valizy sy ny rafi-pisefoanan'ny bibikely, ka hanapoizina sy hahafaty ireo bibikely ary ho poizina ireo bibikely rehetra.
Toy ny: dichlorvos, aluminium phosphide sns .Fumigant dia matetika ampiasaina amin'ny toe-javatra mihidy (trano fandraisam-bahiny, trano fonenana, trano fanatobiana entana).
Bibikely famonoana bibikely: nifoka tamin'ny alàlan'ny ravina, ny taho, ny fakany na ny voan'ny zavamaniry ary azo entina, voatazona, na manaovan'ny zavamaniry hamokarana zavatra misy poizina bebe kokoa.
Raha manindrona ny bibikely ka mitroka ny SAP amin'ny zavamaniry misy poizina na manaikitra ny vatan'ny poizina, dia hiteraka fahafatesan-javatra amin'ny alàlan'ny fanapoizinana. Ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny aphids, planthoppers, bibikely maimbo, sns. ), izay matetika ampiasaina amin'ny fifehezana ny dimegol, imidacloprid, diniformis, sns. Ankoatr'izay, na dia misy bibikely famonoana bibikely aza dia afaka miditra amin'ny vatan'ny zavamaniry, nefa tsy afaka atao amin'ny fitarihan'ny vatana, antsoina hoe "agnement agres".
Bibikely famonoana bibikely manokana: mpandroaka, mpanala, mamotika, tsy misy ilana azy, mpiasa toy ny hormonina, sns. Ohatra, ny imulose sy flufluron dia maty tamin'ny alàlan'ny fanakanana ny syntetika chitin bibikely sy ny fanakanana ny ecdysis sy metamorphosis mahazatra azy ireo.
Pesticides mifangaro:Ny vokatra etsy ambony an'ny pestiside dia misy ifandraisany. Bibikely maro no manana fiasa maro indray mandeha. Amin'ny alàlan'ny fomba fampiharana sasany dia mety mitana andraikitra iray na maromaro ny bibikely. Ny bibikely toy izany miaraka amin'ny vokatra bibikely isan-karazany dia antsoina hoe bibikely feno. Ohatra, ny chlorpyrifos dia manana ny asan'ny touch, poizina vavony, ny fumigation ary ny osmosis, izay mety hahafaty ireo karazana bibikely isan-karazany.